Shirweyne lagu qiimeynayo khataraha lacag dhaqidda ayaa ka furmay magaalada Mogadishu… – Hagaag.com
Shirweyne lagu qiimeynayo khataraha lacag dhaqidda ayaa ka furmay magaalada Mogadishu…
Waxaa maanta Magaalada Muqdisho ka furmay Shirweynaha Qaran ee Wadatashiga Qiimeynta Khataraha Lacag-dhaqidda & Maaligilinta Argagixisada ee Somalia.
Shirweynaha ayaa lagu soo bandhigay warbixin cilmi-baariseed oo dhaqaalaha dalka ay ka soo diyaarisay Xarunta NRA, sida uu sheegay Ra’iisal Wasaare Ku-xigeenka.
“Warbixintan ay soo diyaarisay Xarunta NRA waxa ay diiradda saartay guud ahaan dhaqaalaha dalka, gaar ahaan ka hortagga Lacag-dhaqidda & La-dagaalanka Maalgelinta Argagixisada.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaare Ku-xigeenka.
Wasiir Beyle ayaa Ra’iisal Wasaare Ku-xigeenka iyo xubnihii kale ee shirweynaha ka qaybgalay uga mahadceliyay ka soo qaybgalkooda.